Radio AWR - Ilay feon'ny fanantenana
Catégorie : Radio AWR - Ilay feon'ny fanantenana
Alatsinainy, 8 Martsa 2021 Tsy nety hianao Manampy ny tanora hahavita tena Sarobidy noho ny volafotsy sy ny volamena hianao Natumad Fandonahana ny tany Fiz Andriamanitra;
Alahady, 7 Martsa 2021 Mahatsiravina loatra ny fahotana Akoho amin'ny lasaosy fotsy Ny finoana Mme Bodo Antanenty be (Nanova ahy ny AWR) Mividy zavatra maimaimpoana;
Sabata, 6 Martsa 2021 Tsy matahotra IIMpanjaka Jehovah manamasina Ny fitsarana Mandresy ny ratsy @ fitiavana;
Zoma, 5 Martsa 2021 Mpiandry tsara En bonne sante Avia hiala sasatra Vady toa inona anefa? Ny asan'ny Mesia, fianarana fanampiny;
Alakamisy, 4 Martsa 2021 Aoka ho feno fisaorana ianareo tsitsio ny rano Ekeo ny hanoratana ao amponao ny lalàn'Andriamanitra Ativava FANATIPANONERANA MANOVA NY FIAINANA (Isa. :–);
Alarobia, 3 Martsa 2021 Mivavaha dia matokia an'Andriamanitra Gideona Tsy zioga ny asa fa fitahiana Isika no sarotra vonjena;
Talata, 2 Martsa 2021 Fadio ny fanao ratsy Famporisihina ny olona hamboatra sy hampiasa WC Ovay ny famindra, manana fanetretena Ray amandReny mpanome alalana Iza no nino?;
Alatsinainy, 1 Martsa 2021 Hitahy anao anie ilay raintsika any andanitra Fomba fihainoana Fiz Mahery sady mbola tsy resy an'ady ny Tompo Fiompiana tantely Tononkalo momban'ny fijalian'Ilay mpanompon'i Jehovah ;
Alahady, 28 Febroary 2021 hanaradia an'iza Meringue Suise Havan'i Jesosy manàna finoana Ilay fahamarinana nampahory fo nambaran'i Isaia ;
Sabata, 27 Febroary 2021 Miaramiasa hahasoa I Mpanjaka Sabata sy ny famonjena Ny adidintsika Manatanteraka izay tsy ho vita;
Zoma, 26 Febroary 2021 Raha mifankatia isika, dia mitoetra ao @tsika Andriamanitra Ny herisetra, fiz Antso ho @ fitsaharana Nahoana no manambady ny vehivavy? Manompo sy mamonjy, fianrana fanampiny;
Alakamisy, 25 Febroary 2021 Inona no voa afafinao isan'andro? La pollution de l'eau fiz Fitsarana marina, Na very, na voavonjy Gripa, DR Jacky MPANOMPO ORY SY MAHATSAPA NY FAHORIANTSIKA (Isa. :);
Alarobia, 24 Febroary 2021 Tsy mbola tara ny fiovanao amin'izao anio izao Mafana sy mazava nefa mahasalama Tsy taranaka rajako Ny atao rehetra asio fisainana Fanantenana ho amin'ny ho avy;
Talata, 23 Febroary 2021 Aza maniry fotsiny fa atombohy ny asa Famiasana lavapiringa Ekeo ny hanavao ny toetra isan'andro Ray amandReny tsy mivaky loha Mesia Persiana;
Alatsinainy, 22 Febroary 2021 Aza tia tena Fomba fihainoana Fiz Ny Tompo no manao ny asa Fiompiana tantely Ilay mpanompo tsy voatonona anarana ;
Alahady, 21 Febroary 2021 Ny lanitra mitory ny voninahitr'Andriamanitra Vatomamy amin'ny voanio Nody ny sainy Jean Noêl Besalampy + UAZ Firenena mpanompo;
Sabata, 20 Febroary 2021 Olon'ny finoana I Mpanjaka Fitaka goavana Miresaka amin'Andriamanitra Manompo sy mamonjy;
Zoma, 19 Febroary 2021 Ilaina ny manaiky fotsiny Ny herisetra, fiz Aloky ny hazo fijaliana, fiz Nahoana no hanambady ny lehilahy? Ampionony ny oloko, fianarana fanampiny;
Alakamisy, 18 Febroary 2021 Anjombona fanairana La pollution de l'eau, fiz Aoka ho feno fitiavana Exercice physique Ny olan'ny fanompoantsampy;
Alarobia, 17 Febroary 2021 Ampy ny fanampian'Andriamanitra Toetra tsara Salamo : Mijere lafitsaranjavatra Ilay mpahary be famindrampo;
Talata, 16 Febroary 2021 Ilaina ny mivavaka Fomba fitahirizana rano Aoreno eo amin'i Jesosy ny fiainanao Ray amandReny mpanampatra fahefana Ny niandohan'ny fitoriana ny filazantsara;
Alatsinainy, 15 Febroary 2021 Ilaina ny miteny tsotra eo amin'ny fiainana Mety diso ny ray amandreny Atao anie ny sitraponao Fiompiana tantely Ny fanatrehan' Andriamanitra ;
Alahady, 14 Febroary 2021 Ilay medaly volamena Mofo mamy amin'ny yaourt Miaramandeha Jean Noêl Besalampy Fampiononana ho amin'ny ho avy;
Sabata, 13 Febroary 2021 Aza mandeha @ lalana manimba I MPanjaka Famorana sy Sabata Mpamonjy eo akaiky mandrakariva “Ampionony ny oloko”;
Zoma, 12 Febroary 2021 Tsy hitan'ny maso nefa tsapan'ny fo NY herisetra Aloky ny hazo fijaliana NY herin'ny heritreritra Ny faharesen’ny Asirianina, Fianarana fanampiny;
Alakamisy, 11 Febroary 2021 Jehovah mijery ny fo La pollution Henoy ny feon'nAndriamanitra Repos NA MARARY NA MANANKARENA (Isa. ; );
Alarobia, 10 Febroary 2021 Miaina ampifaliana Ilay kiraro feno fotaka Fomba hialana amin'ny fahantrana Fitondrantena modely Ny tohin'ny tantara;
Talata, 9 Febroary 2021 Afafazo ny soa n'inon'inona mitranga Fisorohana tazomoka Aoreno eo amin'ny Jesosy ny finoanao Dingampivoaran'ny zaza Matahotra kanefa tsy afoy;
Alatsinainy, 8 Febroary 2021 Mahasambatra ny manome Fomba fifandraisana Fiz Jesosy ilay anarana mahagaga Fiompiana tantely Fampielezankevitra ;
Alahady, 7 Febroary 2021 Fa aoka ho mpankatoa ny teny hianareo Voanjo karepoka vady mpamonjy Ho avy Izy miomana inona no nitranga tamin'i Joda;
Sabata, 6 Febroary 2021 Aza kivy I Mpanjaka Andriamanitra no namorona antsika Rehefa ho avy ho anao Jesosy Ny faharesen’ny Asirianina;
Zoma, 5 Febroary 2021 Famelankeloka Coccinelle Fizarana feno fitahiana Trou noir Manao ny tenany ho Andriamanitra, fianarana fanampiny;
Alakamisy, 4 Febroary 2021 Hazony mafy izay tsara Fitahirizana voamaina Andrompahasoavana izao Fiarovana @ afo, fianjerana, zavamaranitra NY FANDRESEN’I ZIONA AMIN’NY FARANY (Isa. );
Alarobia, 3 Febroary 2021 Lalana tsara Marary ny foko Fomba hialana amin'ny fahantrana Mianara hatrany Vavahadin'ny lanitra;
Talata, 2 Febroary 2021 Fitiavana be Fisafoana Aza manaiky ho babon'ny fahendren'olona Dingampivoaran'ny zaza taona Nietry ilay tendrombohitra ;
Alatsinainy, 1 Febroary 2021 Fanilo ny tenin'Andriamanitra Ny reny no tena sakaiza tin'ny zatovo indrindra Miandrandraha hoy Jesosy Aminao Fiompiana tantely Fiz Babilona , ilay tanana lehibe fahiny ;
Alahady, 31 Janoary 2021 Finoana Pure voatavo Tanampitiavana Pstera Rafidinaivo George Ny loza manjo ny firenena;
Sabata, 30 Janoary 2021 Aoka hitombandahy, Mahereza I Mpanjaka Andriamanitra no namorona antsika Momba ny ho avinao fiz Manao ny tenany ho Andriamanitra;
Zoma, 29 Janoary 2021 Inona no vato lehibe eo @ fiainanao? NY fifandraisan'ny fivavahana kristiana sy ny silamo Fizarana feno fitahiana Safidy Andrian’ny fiadanana, fianarana fanampiny;
Alakamisy, 28 Janoary 2021 Manajà ny Ray amandreny Ratran'omby Aza miresaka @ devoly Volo fiz “MAMPIONONA AHY HIANAO” (Isa. :);
Alarobia, 27 Janoary 2021 Ampiasao ny fanomezampahasoavana nomeny anao Tsiky manova zavatra Solomona Mianara hatrany II Jesosy ilay fototra sy rantsana;
Talata, 26 Janoary 2021 Miezaha manao ny tsara indrindra Fisafoana Miaina anaty filaminana araka ny fandaminana Fhamatorana aratsosialin'ny zaza taona Ny tsorakazon'ny fahatezeran' i Jehovah;
Alatsinainy, 25 Janoary 2021 Misy mihaino Inona no ateraky ny maha zatovo amin'ny fiarahamonina Miandrandrà hoy Jesosy aminao Fiompiana karpa andobo Fiz Babilona, ilay tanana lehibe fahiny ;
Alahady, 24 Janoary 2021 Ilay fanafody nisy poizina Vomanga atao gratin Asandrato ny lohanareo Tmg Lalaina & Irene& Ionja Andranomalaza Tsy maizina intsony i Galilia ;
Sabata, 23 Janoary 2021 Izaho no hamonjy anao I MPanjaka SAbata sa Alahady? Momba ny ho avinao Andrian’ny fiadanana;
Zoma, 22 Janoary 2021 Ny fisasarana misy valiny Ny fifandraisan'ny fivavaha lristiana sy ny silamo Finoana tsy dia fandre matetika Fahaizana mifampiresaka Fomba henjana kokoa, fianarana fanampiny;
Alakamisy, 21 Janoary 2021 Ilay vidintsakafo Fixateur Mandosirà fakampanahy Volo NY FAHORIAN’IREO VELONA NEFA MATY ARAPANAHY (Isa. :–);
Alarobia, 20 Janoary 2021 Mianara amin'ny zaza Inona no mahasambatra? Solomaso Mianara hatrany I Tsy misy tokony hatahorana raha matahotra an'Andriamanitra;
Talata, 19 Janoary 2021 Vokatry ny safidinao ihany Ady amin'ny tsy fanjariantsakafo amin'ny Reny mampinono Mijoro ao anaty fahendrena sy fahalalana Dingampivoarana amin'ny fotoana maha zaza taona II Mirakitra inona ny anarana;
Alatsinainy, 18 Janoary 2021 Mahereza, mianara miantehitra amin'Andriamanitra Ny mahatonga ny zatovo voasarika @ firaisana aranofo Miantso anao hitsahatra kely vetivety Jesosy Fiompiana karpa andobo Fiz Ny hafatra manokana ho an'i Ahaza;
Alahady, 17 Janoary 2021 Aza matahotra minoa fotsiny ihany Fromazy vita amin'ny soja Ananantsika fanavotana Ny fitsapana Tanteraka ny faminaniana ;
Sabata, 16 Janoary 2021 Ampiasao ny tafiodrivotra hiakarana ambony I Tantara Fijalian'ireo ho very Mpamonjy eo akaiky mandrakariva Fomba henjana kokoa;
Zoma, 15 Janoary 2021 Tsy hanary mandrakizay ny Tompo Boky torolalana ho an'ny fiangonana Mipetraka aiza ny fanantenanao? Laharampahamehana Rehefa mahaketraka ny toejavatra iainana;
Alakamisy, 14 Janoary 2021 Minoa, manàna fanantenana, aza miala amin'Andriamanitra Fanamboarana ody biby Fiverenana, hanangana @ maty Covid fiz “AMINTSIKA ANDRIAMANITRA”! (Isa. :);
Alarobia, 13 Janoary 2021 Afaka manova anao Jesosy Toromarika Ny adala no manao hoe tsy misy Andriamanitra Fifandraisan'ny tanora sy ny Ray amandReny Famantarana ny amin'ny zazalahy;
Talata, 12 Janoary 2021 Mamela ny helotsika rehetra Andriamanitra Torohevitra dimy ho an'ny fo Hevero ny hafa fa aza tia tena Inona no andrasan'ny zatovo @ Ray amandReny Mbola mamindra fo;
Alatsinainy, 11 Janoary 2021 Ny lanjan'ny fiainana Atao anie ny sitraponao Ady amin'ny aretina mpanimba voly Fiezahana hisakana ;
Alahady, 10 Janoary 2021 Mahaiza mampiasa fotoana yaourt à boire Noho ny teninao Fantaro ny AWR Loza mananontanona avy any avaratra ;
Sabata, 9 Janoary 2021 Maniry hamela sy hanova Izy Fahatezeran'Andriamanitra Fanolorantena Rehefa mahaketraka ny toejavatra iainana;
Zoma, 8 Janoary 2021 Iza no tena namanao, ary ianao ve tena namana? Fampiasana fitenenana, fiz Tsy menatra aho Vady manjakazaka, vahaolana Olana eo amin’ny fitarihana, fianarana fanampiny;
Alakamisy, 7 Janoary 2021 Izay hampadroso sainina sy atao Fanamboarana lalovay, fiz Matokisa ny fiverenan'i Jesosy fanindraoany Diabeta, fiz ANTSO MAMPATAHOTRA;
Alarobia, 6 Janoary 2021 Aoka hiaina @ tenin' Andriamanitra izay zaraina Inona no hiarovan'ny zatovo ny lalankalehany Aza hianteherana @ hafa ny fahombiazanao Iraka avy amin'ny mpanjaka;
Talata, 5 Janoary 2021 Fitiavana sy hafasoavana maimaimpoana Sery sy Gripa ankizy Atokiso Andriamanitra Inona no andrasan'ny zatovo @ RRD Olombaovao;
Alatsinainy, 4 Janoary 2021 Na dia tahaka ny jaky aza Aza manao ariary zato ampandriana Mba maniry te hahita an'i Jesosy ve hianao? Fambolena tongologasy Fiz Masina, masina , masina ;
Alahady, 3 Janoary 2021 Mangataha , mitadiava Paoma amin'ny caramel Fanomezana ho anao Fantaro ny AWR Maty ny mpanjaka , ho ela velona anie ny mpanjaka ;
Sabata, 2 Janoary 2021 Inona no zavadehibe indrindra eo @ fiainanao? II Mpanjaka Fahatezeran'Andriamanitra Dingana dimy ho @ famonjena Olana eo amin’ny fitarihana;
Zoma, 1 Janoary 2021 Modia fa miandry Aho Hatraiza ny farany . Hadinon’ny Isiraely ny mahavahoakan’Andriamanitra azy, fianarana fanampiny;
Alakamisy, 31 Desambra 2020 Sambatra ny madio ampo Fanamboarana lalovay Matahora an'Andriamanitra Diabeta, fiz HIRAMPITIAVANA MAHATAHOTRA (Isa. :);
Alarobia, 30 Desambra 2020 Midika inona aminao ny Baiboly Mahaiza miandry Mijery an'i Jesosy Fiomanana fanambadiana Mihinana na ho lany;
Talata, 29 Desambra 2020 Kristiana marina ve ianao sa Kristiana anarany fotsiny? Tombotsoa folo entin'ny torimaso Hitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra Inona no andrasan'ny zatovo @ Ray aman dReny Fifandaharana momba ny famelankeloka;
Alatsinainy, 28 Desambra 2020 Mampianara anay hanisa ny andronay Tefeo ny toetra mahery fo Miahy sy mikarakara anao Andriamanitra fambolena tongologasy Fanompoampivavahana paokaty ;
Alahady, 27 Desambra 2020 Manantena lanitra vaovao sy tany vaovao Saonjo atao salady Nody ny sainy Handresy Jerosalema Mandrenesa ry lanitra ;
Sabata, 26 Desambra 2020 Ary mandalo zao fiainan'izao sy ny filàny II Mpanjaka Aoka ho vonona Hadinon’ny Isiraely ny mahavahoakan’Andriamanitra azy;
Zoma, 25 Desambra 2020 Maniry hamela sy hanova anao Izy Fampiasana fitenenana, fiz Malemy fanahy Aza matahotra ry ilay malala indrindra NY LANITRA SY NY FANABEAZANA, FIANARANA MANDRAKIZAY, fianarana fanampiny;
Alakamisy, 24 Desambra 2020 Ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra Compost andro Malala indrindra hianao ILAY MPAMPIANATRA LEHIBE ;
Alarobia, 23 Desambra 2020 Tia ny tenin'Andriamanitra ve ianao Mankatoa, mankatoa hatrany Goga sy Magoga Ny sekoly any andanitra;
Talata, 22 Desambra 2020 Fitiavana sy famelankeloka Fisorohana ny aretimpivalanana Ny fanadiovana ny fitoerana Masina Ho fantatsika rahatrizay;
Alatsinainy, 21 Desambra 2020 Lavitra sa akaiky azy hianao Ny tena ray amandreny Jesosy no mpisolo vava anao Fiainana vaovao ;
Alahady, 20 Desambra 2020 Azon' Andriamanitra hitokisana ve hianao Soupe ananan'ambo y legume Zanak'Andriamanitra hianao , Izy no namorona anao Ny anajara miandry ny maty ;
Sabata, 19 Desambra 2020 Mahaiza mijery lafitsarany @ sazy II Mpanjaka Miandry anao ny Paradisa NY LANITRA SY NY FANABEAZANA, FIANARANA MANDRAKIZAY;
Zoma, 18 Desambra 2020 Iraka mitondra fanantenana Fampiasana fitenenana, fiz Ny herin'i Rota Liona tsy manaikitra NY SABATA: MAHALALA SY MANEHO NY TOETRAN’ANDRIAMANITRA, fianarana fanampiny;
Alakamisy, 17 Desambra 2020 Fo falifaly Compost Andro, fiz Matahorà an'Adriamanitra Voalanja FOTOANA FIARAHAMIOMBONA;
Alarobia, 16 Desambra 2020 Safidy tsara Tsiky manova zavatra Ny fiavonavonana mialoha ny fahasimbana Fotoana hahaizana mandanjalanja;
Talata, 15 Desambra 2020 Aza malaky mitsara Fomba fitahirizana rano Matokia an'Andriamanitra Aiza Andriamanitra;
Alatsinainy, 14 Desambra 2020 Mahereza ao amin'ny Tompo Fianakaviana mifandray Miandrasa an'i Jehovah Aoka ho velona hianao Fotoana fandinihina indray ;
Alahady, 13 Desambra 2020 Fanavotana lafo vidy Paty sosety Resy Jerosalema Fotoana natao hahatalanjona ;
Sabata, 12 Desambra 2020 Mivavaha ka aza mitsahatra I Mpanjaka Iza no nanova? fiz Fiainana voarafitr'Andriamanitra, fie NY SABATA: MAHALALA SY MANEHO NY TOETRAN’ANDRIAMANITRA;
Alakamisy, 10 Desambra 2020 Mandrosoa Compost Andro, fiz Iza moa Andriamanitra, fiz Diabeta, fiz NY ASA SY NY FITANTANAMPANANANA;
Alarobia, 9 Desambra 2020 Endrik'Andriamanitra Andriamanitra mpamorona Patricia Fiomanana amin'ny fanambadiana Ny asa sy ny fiainana arapanahy;
Talata, 8 Desambra 2020 Ilay famantaranandro aloka Ny soa entin'ny sakafo sy fanampintsakafo Indro Izaho momba anao Ireo zavatra mikasika sy manodidina ny zaza Miasa, manome ny tsara indrindra;
Alatsinainy, 7 Desambra 2020 Aza kivy fa hafa ny fijerin'Andriamanitra anao Toetra mampiavaka ny zatovo amin'ny fanorenana ny maha izy azy Mahita ny momba anao rehetra Izy Fambolena tongolo gasy Ny asa sy ny fitomboana ;
Alahady, 6 Desambra 2020 Mialohan'ny hanaovana zavatra iray , mivavaha aloha Lasopy saonjo Andrompahasoavana Kely sisa Isaia mpaminany
Sabata, 5 Desambra 2020 Tsy niverina ilalana I Mpanjaka Iza no nanova? Fiainana voarafitr'Andriamanitra NY KRISTIANINA SY NY ASA;
Zoma, 4 Desambra 2020 Mamonjy Jehovah Castor Lehilahy mahery Fahaizamihaino FANABEAZANA AO AMIN’NY HAIKANTO SY NY SIANSA, fianarana fanampiny;
Alakamisy, 3 Desambra 2020 RAha taomin'ny mùpanota, tsia Compost andro Iza moa Andriamanitra Diabeta NAMALY AN’I JOBA ANDRIAMANITRA;
Alarobia, 2 Desambra 2020 Manomeza dia omena Jesosy mpanangana ny maty Gideona Fiomanana amin'ny fanambadiana Ny fahadalàna sy ny fahendrena;
Talata, 1 Desambra 2020 Aza mandainga, aza mihatsara velatsihy Fomba fanatsarana fitadidiana Indro Izaho momba anareo Ny fanabeazana ny zaza dia atomboka raha vao milatsaka ny tany izy lohany amin'ny fampianarandiso;
Alatsinainy, 30 Novambra 2020 Iza no fanazavana anao Toetra mampiavaka ny zatovo amin'ny lafiny fifandraisana Tia anao tsy misy fepetra Jesosy fiompiana akoho nohatsaraina Fiz Fihaingoana masina ;
Alahady, 29 Novambra 2020 Manana ny maha hianao manokana hianao Mofo gasy Ny ranao koa Tmg Jeremi Ambatofotsy (Mampiorina ny finoana ny AWR) Ny Tompo irery ihany ;
Sabata, 28 Novambra 2020 Iza no tsara ao ampiangonana? I Mpanjaka Tsy miova Jehovah Drafitr'Adnriamanitra ho an'ny fiananao FANABEAZANA AO AMIN’NY HAIKANTO SY NY SIANSA;
Zoma, 27 Novambra 2020 Ampahafolonkarena Castor Mandeha miaraka amin'Andriamanitra Fahaizana mihain NY FIANGONANA SY NY FANABEAZANA, fianarana fanampiny;
Alakamisy, 26 Novambra 2020 Fanantenana Mangahazo hatsaraina Iza moa Andriamanitra Volofotsy mitambatra “HANOME ANAREO NY AINAY”;
Alarobia, 25 Novambra 2020 Medaly volamena Jesosy sakaizan'ny zaza Mahafantatra ny zavamiafina Fiomanana amin'ny fanambadiana Ny fikatsahana ny fahamarinana;
Talata, 24 Novambra 2020 Fitiavana lehibe indrindra Fomba fanatsarana fitadidiana Indro Izaho momba anao Ny zaza sy ny tontolompivoarany Miaina amin'ny maha mpianatra;
Alatsinainy, 23 Novambra 2020 Mino ny tenin'Andriamanitra Ireo toetra mampiavaka ny zatovo amin'ny maha izy azy Te hiresaka aminao Jesosy fiompiana akoho nohatsaraina Fiz Antsoina ho fahazavana ;
Alahady, 22 Novambra 2020 Tanjona tsara Soanambo atao karepoka Aretina tsy sitrampanafody Tmg Jeremi Ambatofotsy (mampiorina ny finoana ny AWR) Fanabeazana Kristiana ;
Sabata, 21 Novambra 2020 Mpamonjy mora azo indrindra I MPanjaka Tsy miova Jehovah Drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiainanao NY FIANGONANA SY NY FANABEAZANA;
Zoma, 20 Novambra 2020 Raiso ho anatra ny zavadrehetra Milina manidina Iza no hianteherako? Fahaizana mihaino NY FANABEAZANA SY NY DRAFIPANAVOTAN’ANDRIAMANITRA, fianarana fanampiny;
Alakamisy, 19 Novambra 2020 Sahia miatrika aminkery ny zavamisy Mangahazo mifahy Tsy ny maty no makany andanitra fiz Fikolokoloana ny voa NY FANABEAZANA TAO AMIN’NY FIANGONANA VOALOHANY;
Alarobia, 18 Novambra 2020 Iza no mahery? Mahafantatra ny zavamiafina Tanora sy ny teknojia moderina Lehilahy sy vehivavy hendry ;
Talata, 17 Novambra 2020 Mieritrereta aloha vao miteny Fomba fanatsarana fitadididana Ialao ny ratsy Digampivoaran'ny zaza taona I Mosesy sy ny mpaminany;
Alatsinainy, 16 Novambra 2020 Aza revo miahiahy fa banjino ny lafintsara Zo mitaky andraikitra Fiz Manasa anao Jesosy fiompiana akoho nohatsaraina Fiz Jesosy Ilay Mpampianatra ;
Alahady, 15 Novambra 2020 Matokia Azy fa any ny vahaolana Mofo voanjo amin'ny Chocolat Ny tenany ihany Tmg Elisoa Antsalova Tahaka ny endrik'Andriamanitra ;
Sabata, 14 Novambra 2020 Omeo avokoa izay azonao omena I Mpanjaka Ny andron'ny Tompo Misy lanjany amin'Andriamanitra tokoa ve ny fiainako ? NY FANABEAZANA SY NY DRAFIPANAVOTAN’ANDRIAMANITRA;
Zoma, 13 Novambra 2020 Aoka ho mahalala yanana ianao Giraffe Vavaka fanelanelanana nataon'i Mosesy Fahaizamihaino NY FIVAVAHANA AO AMIN’NY FANABEAZANA, fianarana fanampiny;
Alakamisy, 12 Novambra 2020 Miaiky ny fetran'ny siansa ny pasitora Ombivavy Tsy ny maty no makany andanitra Volofotsy fiz NY FANOMPOANTSAMPY SY NY FANABEAZANA ;
Alarobia, 11 Novambra 2020 Tsy handao anao ilay Andriamanitra Ray Lesona tsara Mahafantatra ny zavamiafina Mila faharetana sy fihafiana raha te ho tafita Fiangonana Masina;
Talata, 10 Novambra 2020 Atsaharo ny resaka fa ny asa atombohy Fomba fanatsarana fitadidiana Ny fahamasinan'ny fahasalamana Fanambadiana Mitovy zo ny lahy sy ny vavy Amin'ny Fanahy sy ny fahamarinana;
Alatsinainy, 9 Novambra 2020 hanahaka ny nataon'i Jesosy Zo sy andraikitry ny olona Mahita ny momba anao rehetra Izy Fiompiana akoho gasy nohatsaraina Ka hitsangana hitory izany amin'ny zanany;
Alahady, 8 Novambra 2020 Misaora Azy amin'ny zavatra rehetra Vary amin'ny poireaux Noho ny Teninao Mme Liva la reunion, mijoro mahatoky amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra Mananjavatra hivavahana avokoa isika ;
Sabata, 7 Novambra 2020 Mitoria @ tenanao I Mpanjaka NY andron'ny Tompo Rehefa ho avy ho anao Jesosy? NY FIVAVAHANA AO AMIN’NY FANABEAZANA;
Zoma, 6 Novambra 2020 Tehirizo ny fanantenana Hipopotame na lalomena Fiainana tsara Fahaizana mihaino fiz LESONA HAFA AVY AMIN’ILAY MPAMPIANATRA LEHIBE, fianarana fanampiny;
Alakamisy, 5 Novambra 2020 Ny boky sarobidy indrindra Ombivavy Andriamanira irery no vahaolana Volofotsy MPIANATRA IRAY NAHAZO NY TIANA HAMBARA;
Alarobia, 4 Novambra 2020 Aleo soa ihany , toa izay tahak'izay Lesona tsara Mahafantatra ireo zavamiafina Mila faharetana sy fihafiana raha te ho tafita Nikiry hatrany ilay vehivavy;
Talata, 3 Novambra 2020 Missafidiana finoana sy fanantenana an'Andriamanitra Fomba fanatsarana fitadidiana Fijoroana Mijoroa hatrany, aza miova Dingampivoaran'ny zaza taona Mikolokolo ny tempolin'Andriamanitra;
Alatsinainy, 2 Novambra 2020 Aza miahiahy ny @ olana tsy mbola mitranga akory Zo sy andraikitry ny tanora Maniry ho sakaizanao Jesosy Fiompiana akoho gasy nohatsaraina fiz Eo ampandosirana ;
Alahady, 1 Novambra 2020 Manaova soa hatrany Masikita @ voankazo voalalotra caramel Iray sa telo? Sambatra ianao raha mahatoky an'i Jehovah Miafina an'Andriamanitra ;
Sabata, 31 Oktobra 2020 Afaka manova anao Jesosy I Mpanjaka Ny Apostoly sy ny Sabata Momba ny ho avinao, fiz LESONA HAFA AVY AMIN’ILAY MPAMPIANATRA LEHIBE;
Zoma, 30 Oktobra 2020 Makany @ ilay Raintsika Itineraire du couple ABC Iz no hanakodia ny vato Fahaizana mihaino JESÔSY, ILAY MPAMPIANATRA LEHIBE, Fianarana fanampiny;
Alakamisy, 29 Oktobra 2020 Aoka hiaina ampifaliana f'aza miferin'aina Koroka mihinana masomboly Manaiky atao batisa Corona virus IREO MPIANATR’I JESÔSY VOALOHANY ;
Alarobia, 28 Oktobra 2020 Fitaka ny miseho ivelany Mahafantatra ireo zavamiafin'ny fiainana Aza ianteherana amin'ny hafa ny fahombiazanao na tsia Mahazo ny fanjakana izay enjehina;
Talata, 27 Oktobra 2020 Fitiavana sy famelankeloka Fanasana tanana amin'ny rano sy savony Misafidiana ny mandrakizay fa aza sodokan'ny ankehitriny Naka ny taolantehezany iray izy Mianatra amin'i Kristy;
Alatsinainy, 26 Oktobra 2020 NATUMAD Ady amin'ny aretina mpahazo ny voly Jesosy Maneho ny Rainy Fiz ;
Alahady, 25 Oktobra 2020 Samy nomen'Andriamanitra ny maha izy avy ny tsirairay Mofo chocolat Tia ny fisehoany Davidah Antsapanana Jesosy maneho ny Rainy ;
Sabata, 24 Oktobra 2020 Raiso avokoa ny fiadin'Andriamanitra rehetra IISamoela Tsy miova ny filaharan'ny herinandro Momba ny arivo taona JESÔSY, ILAY MPAMPIANATRA LEHIBE;
Zoma, 23 Oktobra 2020 Miaramiasa hahasoa izay tia an'Andriamanitra Tanàna vitsy mponina Ho lasa kintana Fahaizana mihaino NY MASON’I JEHOVAH: MANANA FIJERY ARABAIBOLY, fianarana fanampiny;
Alakamisy, 22 Oktobra 2020 Aza mora kivy fa mahereza, miadia mba handresy Fihavana mangahazo Fantatrao ve?...porofompitiavana ny fitandremana ny didin'Andriamanitra Fidiran'ny rivotra NY LALÀN’ANDRIAMANITRA;
Alarobia, 21 Oktobra 2020 Mpandrey ianao Mahaiza mankatoa Mamela ny helony Tsy misy mafy tsy laitran'ny zoto Miankohofa amin'ilay mpanavotra;
Talata, 20 Oktobra 2020 Ny lalana mankany amin'ny fahombiazana Fahadiovana hisorohana ny aretimpivalanana Fijoroana Manohera fakampanahy Dingampivoaran'ny zaza taona Fiainana miaramiafina amin'i Kristy;
Alatsinainy, 19 Oktobra 2020 Maniry hamela sy hanova anao Izy Kajio ny fifandraisana fiz Ny ran'i Jesosy Mahery Torohevitra ho an'ny fotoampambolena voly legioma Mitoetra ao Aminy ;
Alahady, 18 Oktobra 2020 Ataovy tahaka ny ho an'ny Tompo Galet Legume Ny ranao koa Rtoa Davidah Antsapanana Ny mason'i Jehovah;
Sabata, 17 Oktobra 2020 Didimpananana ho anao II Samoela Andro inona marina ny Sabata? Dingana telo hamonjena antsika NY MASON’I JEHOVAH: MANANA FIJERY ARABAIBOLY ;
Zoma, 16 Oktobra 2020 Aza manandrandoza Andriamanitra no avo indrindra iarahan'ny Baiboly sy ny Coran Fitiavan'Andriamanitsa Fahaizana mifandray, famintinana Manana ny lalàna ho mpampianatra, fianarana fanampiny;
Alakamisy, 15 Oktobra 2020 Misaora @ zavatra rehetra MAsomboly mangahazo Mino sy atao batisa Torimaso Jesosy ilay ohatra ho antsika;
Alarobia, 14 Oktobra 2020 Ianareo no epistily velona Izay asaina atao atao Manao ankiafina ny fiainanao ve ianao? Iza moa aho? Ny fahoriana sy ny lalàn'Andriamanitra;
Talata, 13 Oktobra 2020 Jehovah handamina ny lalanao Fampiasana lavapiringa Miandania amin'Andriamanitra fa soa ho anao izany Ny fanambadiana mpanampy tandrify Ny tsiambaratelon'ny fahazoana fanambinana;
Alatsinainy, 12 Oktobra 2020 Mivavaha dia mahatokia an'Andriamanitra Kajio ny fifandraisana Mamonjy anao Jesosy , ary mampody ny fahorianao ho fifaliana Fomba fambolena araboajanahary Hafatra nataon'i Mosesy tamin'ny zanak'Israely ;
Alahady, 11 Oktobra 2020 Hidera anao aho fa mahagaga ny nanaovanao ahy Flan vita amin'ny korzety Jesosy ve Mpamorona Fisaorana sy Fiderana Tia sy matahotra an' Andriamanitra ;
Sabata, 10 Oktobra 2020 Mangataha dia hahazo II Samoela Mba tsy ho ririnina na ho @ Sabata fanomezampahasoavan'ny fanahy Manana ny lalàna ho mpampianatra;
Zoma, 9 Oktobra 2020 Na inona na inona angatahinao @ finoana Un corp sein (ABC) Misy tokoa ve Andriamanitra? TSy hifandovàna ny toetra ratsy Ny ankohonana, fianarana fanampiny;
Alakamisy, 8 Oktobra 2020 Aoka ho mahatoky @ kely indrindra Voly volana Avril Fantatrao ve Jesosy? fiz Fahasalaman'ny vatana, fiz Fandrao manadino ianareo;
Alarobia, 7 Oktobra 2020 Raha tsy toy ny zaza ianareo Mitovy ve? Ilay vohitry ny fanantenana Asa Ny andraikitry ny Ray amandreny;
Talata, 6 Oktobra 2020 Tsy avy tamin'ny kisendrasendra isika fa nisy namorona Fambara loza @ zaza Ialao ny fijangajangana sy ny fijejojejoana Dingampivoaran'ny zaza Ans Fifandraisana;
Alatsinainy, 5 Oktobra 2020 Matokia Azy amin'izay atao rehetra Fivoaran'ny zatovo eo amin'ny fiainana sy ny manodidina Mihaino, Miahy, Mamonjy anao Jesosy Hiasa sy hitandrian ny saha Ny fanabeazana noraisin'i Jesosy tamin'ny fahazazany;
Alahady, 4 Oktobra 2020 Andriamanitra no Aro sy hery ho antsika Salady miaraka amin'ny radia Iza moa Jesosy Pst Herman mitaona olona ny hira , Manampy amin'ny asa atao ny AWR Ny fanabeazana ao amin'ny ankohonana ;
Sabata, 3 Oktobra 2020 Ny herin'ny tenin'Andrimanitra II Samoela Raha tia Ahy hianareo dia hitandrina ny didiko Fanahy Masina sy ny heriny Ny ankohonana;
Zoma, 2 Oktobra 2020 Ny tena harena sy fahasalamana Jesosy ilay Andriamanitra hatrizay Handositra fakampanahy Fahaizana mifandray, fiz Ny fanabeazana tao Edena, fianarana fanampiny;
Alakamisy, 1 Oktobra 2020 Mifaly sy manao tsara Compost andro, fiz Fantatrao marina ve Jesosy, fiz Ireo fahazaran arapahaslamana ho an'ny atidoha Ireo mpanamavo ny fahalehibiazana;
Alarobia, 30 Septambra 2020 Atombohy aminao ny fanovana Kapohy mafy Salamo : Asa Mahazo indray ny efa very;
Talata, 29 Septambra 2020 Afafazo Fisorohana ny aretina vokatry ny loto Apetraho amin'i Jehovah ny entanao Ny fanambadiana Andriamanitra mahafantatra ny sahaza Tsy nankato ny hafatra;
Alatsinainy, 28 Septambra 2020 Fenohy fanantenana ny izao sy ny ampitso Asio fanamboarana ny fifandraisana amin'ny Ray amanDreny Tsy vahiny amin'Andriamanitra intsony hianao fa ankohonany Hiasa sy hitandrian ny saha Ilay vahiny tsy nasaina ;
Alahady, 27 Septambra 2020 Izao anio izao Soupe korizety sy fromazy Tsy manaja izay masina Andriamanitra fitiavana Ilay sekoly voalohany;
Sabata, 26 Septambra 2020 Afaka manova ny jaki ho fotsy toy ny orampanala II Samoela Ny Sabata famantarana Akaiky manahoana ny fihavin'i Jesosy? Ny fanabeazana tao @ saha Edena;
Zoma, 25 Septambra 2020 Ataovy toy ny ho an'Andriamanitra Un esprit positif 'ABC ) Ny nofy Fahaizamifandray Mandroso ampinoana( fianarana fanampiny);
Alakamisy, 24 Septambra 2020 Efa tonga ny famonjena Lgalin'ovy sy voatabia Andriamanitra ihany no hiankohofana Covid Fahano ary ny Odrikeliko.;
Alarobia, 23 Septambra 2020 Tratranao ny tanjonao Mahasoa antsika izany Aza tia izao tontolo izao Tombambidin'ny firaisana aranofo sy tanora Ny zavatra takin'ny fitiavana amintsika;
Talata, 22 Septambra 2020 Mahita an'andriamanitra indray Fisorohana tsifanjariantsakafo eo amin'ny vehivavy bevohoka Fijoroana Aza miova amin'ny fahamarinana efa narahina Beazo arapanahy ny zaza I Paoly ilay mpitarika voafidin'Andriamanitra;
Alatsinainy, 21 Septambra 2020 Izay tianao atao aminao dia ataovy amin'ny hafa Diniho sy tandremo tsara ny zavatra atao Jesosy Ilay Anarana mahagaga Hiasa sy hitandrian ny saha Ny fomba iantsoan'i Jesosy ny olona hanaraka Azy;
Alahady, 20 Septambra 2020 Fitondrana mahagaga Mofo tantely Tsy misy fanatitra hoe RANDRIAMIZAKA Andramasina Tonga hatrany amin'ny fahafatesana Jesosy noho ny fitiavany antsika;
Sabata, 19 Septambra 2020 Manaova ny marina mandrakariva II Samoela Sabatan'i Jehovah Andriamanitra Takelaby manambara fa akaiky ny fiverenan'i Jesosy Mandroso amimpinoana;
Zoma, 18 Septambra 2020 Mamela ny helotsika rehetra Andriamanitra Ilay Jesosy zanak'Andriamanitra Fahombiazana tsara lavitra fahaizana mifandray, hamoray arak'izay azo atao Hafatra mendrika hozaraina, fianarana fanampiny;
Alakamisy, 17 Septambra 2020 Mpamela sy mpanafaka Andriamanitra Voly laisoa Fantatrao marina ve Jesosy? Fahadiovana, fiz NY FANASANA FARANY ATAON’ANDRIAMANITRA (Apôk. :);
Alarobia, 16 Septambra 2020 Miaramiady aminao Jehovah Zaza mazoto Aza tia izao tontolo izao Fiankinandoha sy vahaolana Mahatakatra amin'ny fahafenoany kokoa ny hafatr'Andriamanitra;
Talata, 15 Septambra 2020 Inona no zavadehibe indrindra eo amin'ny fiainana Sakafon'ny zaza volana aorian'ny aretina Hafatra mitondra fahasambarana Ny fanambadiana mahagaga ny nanaovan'Andriamanitra anao Momba ny andro farany ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy;
Alatsinainy, 14 Septambra 2020 Avelao ny Raintsika any andanitra no hitondra ny fiainantsika Fomba fiteny sy firesaka Miandrandrà hoy Jesosy aminao Hiasa sy hitandrian ny saha Hafatra momban'ny andro farany ao amin'ny bokin'ny Apokalypsy;
Alahady, 13 Septambra 2020 Ampiasao ny tafiodrivotra hiakarana ambony kokoa Akondro atao baolina Finoana mahavonjy Fanomezantsoa Sud Ambohipo Nisy akony tsara teo amiko sy ny fianakaviako ny AWR Hafatra mendrika hozaraina amin'ny olona rehetra;
Sabata, 12 Septambra 2020 Izay mamela heloka dia voavela heloka II Samoela Sabatan'i Jehovah Andriamanitra Ireo takelaby manambara fa akaiky ny fihavin'i Kristy Hafatra mendrika hozaraina;
Zoma, 11 Septambra 2020 Izay zaka ihany no ampintondrain'Andriamanitra Decouvrez votre valeur ABC Ny antony nahaterahako Fahaizamifandray Mizara ny tantaran’i Jesôsy, fianrana fanampiny;
Alakamisy, 10 Septambra 2020 Miaraha mandeha amin'Andriamanitra isan'andro Famonoana bibikely, fiz Antsoina hanana fanetrentena Fahadiovana Vaovao mendrika ho zaraina;
Alarobia, 9 Septambra 2020 Izay zavatra tsara tratrarina Dia tsy tanteraka ny nofinofiko Tsy taranaka rajako II Fiankinandoha & zavadoza aterany Mijoro ho vavolombelona tsy amin'ny ahiahy;
Talata, 8 Septambra 2020 Manaova ezaka vaovao hatrany rehefa tsy mahomby Sakafon'ny zaza mihoatra ny volana Fijoroana Asio fototra ny fiainana Dingampivoaran'ny zaza taona Milaza ny tantaran'i Jesosy;
Alatsinainy, 7 Septambra 2020 Manana fikirizana fa aza mora kivy Tanora mandray antanana ny hoaviny sy ny fiarahamonina Miandrandrà hoy Jesosy aminao Natumad Fomba ahazoana masomboly voafantina II Ny hery manovan'ny fijoroana
Alahady, 6 Septambra 2020 Mahaiza mihaino Mofomamy amin'ny poara Torabato avy any andanitra Izahao no hikarakara ny ondriko Jesosy no antony hijoroantsika vavolombelona;
Sabata, 5 Septambra 2020 Mamonjy atrany Andriamanitra II Samoela Ny fiankohofana tena izy, fiz Misy lanjany @ Andriamnitra tokoa ve ny fiainako? Mizara ny tantaran’i Jesôsy ;
Zoma, 4 Septambra 2020 Fanampiana mahagaga Jesosy tenin'Andriamanitra maneho ilay fitiavana Maria sy Elizabeta Fifandraisana mamonjy Fomba mampientanentana handraisana anjara amin’ny asan’Andriamanitra , fianarana fanampiny;
Alakamisy, 3 Septambra 2020 Valimbavaka Fanamboarana ody biby Fantatrao marina ve Jesosy, fiz Virus NY FOMBA FIASAN’NY TARIKA MADINIKA (Asa. :);
Alarobia, 2 Septambra 2020 Voavotra Madio sy milamina Tsy taranaka Rajako Ilana ny fifehezana filana anaty Ireo trika madiniky ny testameta vaovao;
Talata, 1 Septambra 2020 Mahita an'Andriamanitra indray Fisorohana ny aretimpivalanana Ho avy ho anao Jesosy Tontolo iainana tsara Nalamina ho amin'ny fanompoana;
Alatsinainy, 31 Aogositra 2020 Tara avion Ray amandreny manatanteraka izay ilain'ny zatovo Miandrandra hoy Jesosy aminao Natumad Fomba ahazoana masomboly voafantina I Tarika mahomby amin'ny asa fitoriana ny Filazantsara;
Alahady, 30 Aogositra 2020 Finoana sahy Pain perdu Fanahy sy fahamarinana Ambohimanjakan'Ididy Ny fitoriana ny Filazantsara mahomby ;
Sabata, 29 Aogositra 2020 Aza matahotra fa fantatry ny mpanjaka ny lalana aleha II Samoela Ny fiankohofana tena izy Tena mis ny lanitra, fiz Inona no fomba mampientanentana andraisana anjara @ asan'Andriamanitra?;
Zoma, 28 Aogositra 2020 Jehovah handamina ny lalanao Andriamanitra fitiavana Zavatra mahadomelina vaovao Fahaizana miresaka, famintinana fiz sy Ny fihetsempon'i Jesosy manoloana ny hafa, fianarana fanampiny;
Alakamisy, 27 Aogositra 2020 Manefy anao ho mafy ny zavatsarotra lalovanao Ravina voanjobory( ady @ voalavo) Mifamela heloka Covid , fiz Fahamarinana zaraina @ fahalemempanahy;
Alarobia, 26 Aogositra 2020 Mifampivavaha mba ho sitrana ianareo Mino aho fa taompiadanana Fomba atao mpba hifankazahoana amin'ny Ray amandReny Ny fototra iorenan'ny fanekena ny hafa;
Talata, 25 Aogositra 2020 Araraoty ny mifaly mandrakariva Fanaovana vakisiny ny zaza Ireo fitsipika folo mitondra fandriampahalemana Mizara ny fahamarinana amimpitiavana;
Alatsinainy, 24 Aogositra 2020 Tongava aminao araka izay irinao Fomba fifandraisana fanatanterahana Miantso anao mba hitsahatra kely vetivety Jesosy Voly rakotra (fanamboarana) Ny fomba nandraisan'i Jesosy ny olona ;
Alahady, 23 Aogositra 2020 Ny lalana mankany amin'ny tsara hizorana Vary amin'ny legume Izaho efa naharesy Ambohimanjakan'Ididy Ny fihetsehampon'i Jesosy manolona ny hafa;
Sabata, 22 Aogositra 2020 Aza manary toky II Samoela Tamin'ny voalohany Andriamanitra Tena missy ny lanitra Ny fihetsempon'i Jesosy manoloana ny hafa;
Zoma, 21 Aogositra 2020 Andriamanitra Ray Ny toetran'Andriamanitra hitovizan'ny Baiboly sy ny Coran Sambofiara Mifehy ny fironan'ny saina Manampy hafa tahaka izay nataon'i Jesosy, fianarana fanampiny;
Alakamisy, 20 Aogositra 2020 Aza mivesatra samirery Voly tongolo Fantatrao marina ve Jesosy? COVID Inona moa no zavadehibe ho an'i Jesosy?;
Alarobia, 19 Aogositra 2020 Voadio Mino aho Sambatra ny firenena II = Namandratsy Ny asa fanasitranana nataon'i Jesosy fizarana faharoa;
Talata, 18 Aogositra 2020 Fo vaovao Sakafon'ny zaza vao teraka hatramin'ny volana Antomotra ny faran'ny zavatra rehetra Dingampivoaran'ny zaza taona fiz Ny asa fanasitranana nataon'i Jesosy fizarana voalohany;
Alatsinainy, 17 Aogositra 2020 vavaka no fanantenana Fomba fifandraisana fifampikasohana Mivavaka ho anao Jesosy Voly rakotra (Tombontsoa) Ny fahalemempanahin'i Jesosy tamin'ny olona ;
Alahady, 16 Aogositra 2020 Aza matahotra mofokatsaka amin'ny mananasy Ny finoana an'i Jesosy Manàna finoana Ny fihetsehampon'I Jesosy ;
Sabata, 15 Aogositra 2020 Tonga Jesosy mitady izay maniry ho vonjena II Samoela Tamin'ny voalohany Andriamanitra Misy lanjany amin'Andriamnitra tokoa ve ny fiainako? Manampy ny hafa tahak'izay nataon'i Jesôsy;
Zoma, 14 Aogositra 2020 Miala @ fahazarandratsy Vitsika eo @ tontolo iainana Ny fisainantsika Fahaizana miresaka, fiz Mizara ny teny, fianarana fanampiny;
Alakamisy, 13 Aogositra 2020 Tiava ny namanao tahaka ny tenanao Voly pitipoa Manaiky an'Andriamanitra Famerenan'aina rehefa avy narary Mizara ny fahamarina araBaiboly;
Alarobia, 12 Aogositra 2020 Fa katsaho aloha Ny tenako manontolo Sambatra ny firenena I Araraoty ny fianarana Mampihatra ny tenin'Andriamanitra;
Talata, 11 Aogositra 2020 Aza manao tsinontsinons ny hafa, dia aza manaiky ho kivy Fambara loza eo amin'ny zaza Andriamanitra no tompon'ny teny farany Dingampivoaran'ny zaza Ny tombotsoa avy amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra;
Alatsinainy, 10 Aogositra 2020 Mivavaha ka aza mitsahatra Fomba fifandraisana Fiz Jesosy no Lahimatoantsika NATUMAD Fomba atao hahazoana masomboly voafantina Ny herin'ny Tenin'Andriamanitra ;
Alahady, 9 Aogositra 2020 Tandremo sao diso lalana raha maniry hiadana Baranjely miaraka amin'ny atody Misy fanomezana ho anao Nantenaina Canada nanova ny fiainanay ny AWR Fanoharana hoentimanondro ny Baiboly;
Sabata, 8 Aogositra 2020 Mahatsiarova ny andro SAbata hanamasina Azy II Samoela Soratako ao ampony ny lalàko Rehefa ho avy ho anao Jesosy fiz Mizara ny Teny;
Zoma, 7 Aogositra 2020 Izay zaka ihany no ampitondrain'Andriamanitra Ny omby vavy Tao Getsemane Fahaizana miresaka fahafahana manao tsy misy fetra fianarana fanampiny;
Alakamisy, 6 Aogositra 2020 Mivavaha ka aza mitsahatra Ady @ olimpanjeny Minia tsy mandoto tena zavamaniry sy sakafo miaro ny atidoha Mampitombo ny fanomezampahasoavana ananantsika;
Alarobia, 5 Aogositra 2020 Hitahy anao anie ilay Raintsika ao andanitra Karakaraiko ny tenako Maty ve ny maty Ny lanjan'ny atao hoe Ray Mamantatra ny fanomezampahasoavana anananao;
Talata, 4 Aogositra 2020 Finoana sy asa Fambara loza eo amin'ny zaza menavava Manolotra ny sarobidy indrindra ho an'i Jesosy Alitara ao antokatrano Ny tanjon'ny fanomezampahasoavana;
Alatsinainy, 3 Aogositra 2020 Mandalo ny eto, mahaiza manararaotra Ny andraikitra eo @ fiarahamonina fiz Jesosy tia mihoatra noho ny rahalahy Torohevitra ho an'ny taompambolena fiz Fahafahamanao tsy misy fetra avy amin'Andriamanitra;
Alahady, 2 Aogositra 2020 Mitondra fiadanampo Purévoatavo Manao ahona ny hiverenany? Temoignage Nantenaina Canada Nanova ny fiainanay ny AWR Fahafahamanao tsy misy fetra avy amin'Andriamanitra;
Sabata, 1 Aogositra 2020 Hafatra ho anao Talilio amiko ny Baiboly Toriteny Fianarana Baiboly Lesona sekoly Sabata
Zoma, 31 Jolay 2020 Hafatra ho anao Tsara ho fantatra Toriteny Fiainampianakaviana Lesona sekoly Sabata
Alakamisy, 30 Jolay 2020 Hafatra ho anao Asa sy tontolo iainana Toriteny Harena ny fahasalamana Lesona sekoly Sabata
Alarobia, 29 Jolay 2020 Matokia an'i Jehovah fa Izy hanome anao fahombiazana Nandresy aho Fitsanganana amin'ny maty Fomba atao ahitana fahombiazana Ny Fnanhy Masina sy ny Biboly ary ny fijoroana ho vavolombelona;
Talata, 28 Jolay 2020 Aza laniana amin'ny menomenona sy fijerena ny lafiratsinjavatra ny fiainanao Fanomezana ranombatsy ny zaza vao teraka Azo atao ny miala amin'ny aretimpo sy rarintsaina Dingampivoaran'ny zaza taona
Alatsinainy, 27 Jolay 2020 Matokia Azy na sarotra aza ny manjo Andraikitra eo amin'ny fiarahamonina Nifidy ho ralahina sy ho anadahinao Jesosy Voly voatabia FIANGONANA FENO NY HERIN’NY FANAHY ;
Alahady, 26 Jolay 2020 Aza be fanahiana Soupe anan'ambo sy legume Tena avy Izy Ny fiavian'I Jesosy NY FAMPANANTENAN’I JESÔSY: NY FANAHY MASINA ;
Sabata, 25 Jolay 2020 Hafatra ho anao Talilio amiko ny Baiboly Toriteny Fianarana Baiboly Lesona sekoly Sabata
Zoma, 24 Jolay 2020 Hafatra ho anao Tsara ho fantatra Toriteny Fiainampianakaviana Lesona sekoly Sabata
Alakamisy, 23 Jolay 2020 Hafatra ho anao Asa sy tontolo iainana Toriteny Harena ny fahasalamana Lesona sekoly Sabata
Alarobia, 22 Jolay 2020 Manampy anao hatrany Andriamanitra Mahaiza miandry Fikasihana fanindroanay Aza manao tsobodranondRamiangaly Hery tsy hita maso izay miasa;
Talata, 21 Jolay 2020 Halaviro ny ratsy ka manaova soa Fisorohana tazomoka eo amin'ny vehivavy bevohoka Miankina amin'ny herin'Andriamanitra Mifampiankina ny fanabezana sy ny lalao Ny vavaka fanelanelanana nataon'i Paoly ;
Alatsinainy, 20 Jolay 2020 Jehovah mahalala izay mahasoa Ny anjara asan'ny tanora eo amin'ny firaisankina Miteny aminao Jesosy Fandonahana ny tany Jesosy Ilay Mpanalala lehibe;
Alahady, 19 Jolay 2020 Tena tia antsika Andriamanitra Paty sosety Vaovao Ny fomba fanitsian'Andriamanitra ny malalany Ny ady lehibe ifanaovan'ny tsara sy ny ratsy;
Sabata, 18 Jolay 2020 Fitiavan'Andriamanitra II Mpanjaka Fahatezeran'Andriamanitra, fiz Fibebahana, fiaikenkeloka, fiovampo Ny herin'ny vavaka: manao fanelanelanana ho an'ny hafa;
Zoma, 17 Jolay 2020 Lay hoe Ampio aho Adriamanitra lasa hoe zaho ty Adriamanitra NY toetran'Andriamanitra hitovizan'nyu Baiboly sy ny Coran Mipetraka aiza ny fanantenanao? Fampiharana ataondramose sy madama
Alakamisy, 16 Jolay 2020 Omeo @ fo izay an'Andriamanitra fa hamaly soa anao Izy Ramerina Izaho sy ny raha raty hiainako Sakafo sy fahasalamana, fiz Rehefa manokatra lalana hijoroantsika ho vavolombelona Andriamanitra;
Alarobia, 15 Jolay 2020 Ny zanany aza natolony, maika fa zavatra hafa Ny Baiboly Ny lanitra sy tany vaovao, tena misy ve? Ahona no atao amin'ny olona sarotra ifandraisana?;
Talata, 14 Jolay 2020 Ny tena fiainana soratana fa aza amboarina Ady amin'ny fahazarandratsy Maty tokoa ve ny maty? Atombohy eo amin'izay misy anao;
Alatsinainy, 13 Jolay 2020 Enga anie Fiarahamonina sy ny fihavanana Ahoana no hanombohana fiainambaovao Lesona momba ny fanekena ny olona ;
Alahady, 12 Jolay 2020 Tsy ny mofo ihany Chocolat chaud vita @ solila Tokantrano sambatra Ilay fikasihana faharoa;
Sabata, 11 Jolay 2020 Izy ilay Jehovah no tena tia anao II Mpanjaka Ilay fotoana ho tsarovana mandrakizay Mahita ny hafa amin’ny fijerin’i Jesôsy
Zoma, 10 Jolay 2020 Zay malaky tezitra manetsitadiny Autruche Ilay fitaratra tsy mety vaky Mijoro ho vavolombelona ho an’i Jesôsy: Ny herin’ny tantarantsika manokana, fianrana fanampiny
Alakamisy, 9 Jolay 2020 Ninia tsy hahafantatra zavatra hafa Fanafody olitra@ laisoa Draitra ho @ fiainana NY HERIN’NY TANTARANTSIKA MANOKANA (Asa. :);
Alarobia, 8 Jolay 2020 Mankatoa sy mahatoky izay lazainy Fialantsasatra vita Misy lanjany ve ny fiainako? Mizara ny fanandramantsika;
Talata, 7 Jolay 2020 Mangataha, mitadiava Transport d'urgence Afaka mino ny Baiboly isika Ny herin'ny fiainana voaova;
Alatsinainy, 6 Jolay 2020 Jesosy maty ho antsika Aza manao tsinontsinona ny hafa Momba anao ary tsy handao anao mihintsy Izy CONFERENCE Afaka mino an'Andriamanitra Velona ny Mpamonjintsika
Alahady, 5 Jolay 2020 Izay afafy no hojinjaina Lasopy katsaka Valisoan'ny voavela heloka Ny fomba fanitsian'Andrimanitra ny malalany Olona tsy hampizina hijoro vavolombelona
Sabata, 4 Jolay 2020 Mamindra fo II Mpanjaka Eo @ tanana sy eo @ andrina Ny lalàna sy ny filazantsara Mijoro ho vavolombelona ho an’i Jesôsy: Ny herin’ny tantarantsika manokana;
Zoma, 3 Jolay 2020 Velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra Panda lehibe Tsy menatra aho Ny tokony ho fantatrao ny @ Firaisana aranofo mba tsy amphomby ny devoly Nahoana no tokony hijoro ho vavolombelona? fianarana fanampiny;
Alakamisy, 2 Jolay 2020 Mandrosoa Ovy Izaho sy zanahary Famorana, fiz TARIHIN’NY FITIAVANA ( Kôr. :,,);
Alarobia, 1 Jolay 2020 Mampahory ny tahotra, aoka ho tia Karakarao izy Kristy mpanafaka Mila faharetana sy fihafiana raha te ho tafita Mankato ny baikon'iJesosy;
Talata, 30 Jiona 2020 Aza mamono ny feon'ny fiheritreretana Sira be sy fahasalamana Mikely aina fatratra Inona no andrasan'ny zatovo amin'ny Ray amandReny Mitombo isika rehefa manome;
Alatsinainy, 29 Jiona 2020 Ataovy izay tsara indrindra azonao atao Aleo very tsikalakalambola toy izay very tsikalakalampihavanana Ny Tompo no manao ny asa Kaonsoda Andeha hanao izay mahafaly an'i Jesosy;
Alahady, 28 Jiona 2020 Ny tanjona eo amin'y fiainana Saonjo ramandady nendasina Ody fahotana Miverena Omen'Andriamanitra antsika ny tombontsoa hahazo ny famonjena;
Sabata, 27 Jiona 2020 za manaiky hanota Eo tanana sy eo andrina Ny lalàn'Andriamanitra Nahoana no tokony hijoro ho vavolombelona
Zoma, 26 Jiona 2020 Mbola hiverina izy Andriamanitra fitiavana Sambatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho Andriamaniny Mivelona araka ny Tenin’Andriamanitra, fianarana fanampiny;
Alakamisy, 25 Jiona 2020 Esory aloha ny andry eo @ masonao Ovy Fiverenana hanangana @ maty Famorana ANDALANTSORATRA MASINA SY HIRA (Sal. :;
Alarobia, 24 Jiona 2020 Mahaiza mampiasa fotoana Ilay zavamiafina Olombaovao Araraoty ny mianatra Fotoana mangina handihihana ny Baiboly;
Talata, 23 Jiona 2020 Seza foana Cholesterol sy tongologasy Mikely aina fatratra Inona no andrasan'ny zatovo amin'ny Ray amandReny Efa nanohitra izay ambaran'ny Baiboly ve Jesosy?;
Alatsinainy, 22 Jiona 2020 Miaramisa hahasoa anao Ny mahazavadehibe ny safidy sy ny fanapahankevitra Fahasoavana sy famindrampo no hanaraka ahy NATUMAD Composte mailaka Fiz Mianatra amin'I Jesosy ;
Alahady, 21 Jiona 2020 Ataovy amin'ny hafa izay tianareo atao amin'ny tenanareo Poudine vita amin'ny mofodipaina Fitahiana sadoky ny fahotana Eugène Jamba Marovoay Ny tenin'Andrimanitra velona sy ny Fanahy Masina
Sabata, 20 Jiona 2020 Raketo ao ampo ny tenin'Andriamanitra Ny mariky ny bibidia Ny fitsarana Mivelona araka ny Tenin’Andriamanitra;
Zoma, 19 Jiona 2020 Tsy misy takona izay tsy aseho Lolo Ho avy indray Kristy ary hizara roa izao tontolo izao Firaisana aranofo sy fifandraisana @ NAdriamanitra Ny fomba fianarana ireo andalanteny sarotakarina, fianarana fanampiny;
Alakamisy, 18 Jiona 2020 Mijere an'i Jesosy Vomanga sy saonjo lasa koba, fiz Matokisa ny fiverenan'ny Jesosy fanindroany Sakafo sy fahasalamana, fiz MIVAVAHA REHEFA MIANATRA ANDALANTENY SAROTAKARINA (Asa. :);
Alarobia, 17 Jiona 2020 Poteho dieny izao ny fahazarandratsy Tsy mety ny mangalathaka Mihombo eo amin'ny hazofijaliana Tanor sy fianarana(tanora rtsy fihary) Fahzotona sy faharetana;
Talata, 16 Jiona 2020 Aza mampahory ny hafa Sakafo mampatanjaka hery fiorovna Aza manameloka ny namanao Inona no andrasan'ny zatovo amin'ny Ray amandReny Ny famahana olana amin'ireny toejavatra ireny;
Alatsinainy, 15 Jiona 2020 Mahaiza mihaino dia hendre Manolona ny sakana aza kivy Omen'Andriamanitra Ray maimaimpoana ao amin'I Jeosy ny zavatra rehetra NATUMAD Compost mailaka Fiz Ny fomba fijerena ny fahasamihafana ao amin'ny Baiboly ;
Alahady, 14 Jiona 2020 Aza mijanona raha tsy tratara ny tanjona Glace sucette vita amin'ny vomanga sy yaourt Fiarovana Eugene Jamba Marovoay Inona no mety anton'ireo toejavatramifanohitra ao amin'ny Baiboly ;
Sabata, 13 Jiona 2020 Miteny aminao Jesosy II Mpanjaka Ny tombokasehin'Andriamanitra, fiz NY adidintsika amin'Andriamanitra Ny fomba fianarana ireo andalanteny sarotakarina;
Zoma, 12 Jiona 2020 Mazotoa miasa Leopard NY fiavin'i Kristy sy ny lalàna NY firaisana aranofo sy ny fifandraisana @ mpivady Ny Baiboly sy ny faminaniana, fianarnaa fanampiny;
Alakamisy, 11 Jiona 2020 Manatrika antsika hatrany Andriamanitra Vomanga sy saonjo lasa koba, fiz Ny finoana, fiz Atidoha, fiz FITSIPIKA MANOKANA AO AMIN’NY BAIBOLY ( Kôr. :);
Alarobia, 10 Jiona 2020 Jesosy no mpamonjy Arivotaompiadanana Ny atao rehetra asio fisainana Ny fitsrana famotopotorana;
Talata, 9 Jiona 2020 Mizara amin'ny hfa Tombotsoa folo entin'ny torimaso Sangan'asan'Andriamanitra Ny fiovana eo amin'ny maha zatovo Interview Iza ilay tandroka kely;
Alatsinainy, 8 Jiona 2020 Mahaiza mandefitra Mahavonjy izay manantona an'Andriamanitra amin'ny alalany Jesosy Compost Mailaka Fiz Ny hahafantarana ny halavampotoana arapaminaniana ;
Alahady, 7 Jiona 2020 Omeo fanantenana ny olona hafa Caramel d'arachide Avy aiza ny ratsy Antsoy aho amin'ny andro fahoriana Ny tantara sy ireo faminaniana momba ny fotoana ;
Sabata, 6 Jiona 2020 Manova ny tenin'Andriamanitra NY tombokasehin'Andriamanitra Miresaka amin'Andrimanitra Ny Baiboly sy ny faminaniana;
Zoma, 5 Jiona 2020 Marina, tsara, mahasoa Andriamanitra avo indrindra iarahan'ny Baiboly sy ny Coran Ny lalàn'Andriamanitra Davida sy jonatana Ny Baiboly amin’ny mahatantara azy, fianarana fanampiny;
Alakamisy, 4 Jiona 2020 Maniry famelankeloka Fano, kelabe, kalafotsy Ny finoana fiz Fiaraovana ny fahasalamana NY FINOANA SY NY TANTARA (Heb. :);
Alarobia, 3 Jiona 2020 Tohero ny ratsy Fomba hialana amin'ny fahantrana Ny zavakendren'ny fianarana Jesosy ao amin'ny tantara;
Talata, 2 Jiona 2020 Aza tia tena Sakafo mahatanora Afaka miresaka amin'Andriamanitra ve isika? Inona no mahatonga ny zatovo ho tia andrakandrana Idaniela sy Nebokadnezara ary Babilona;
Alatsinainy, 1 Jiona 2020 Manamboatraho amin'ny tsara kokoa Fihavanana Aza manahy sarobidy amin'Andriamanitra ianao Torohevitra ho amin'ny taompambolena Fiz Isaia , Ezekia, sankeriba ;
Alahady, 31 May 2020 Tsy hanary mandrakizay ny Tompo fruit confi papay Fahamarinana ao ampo Infirmier mivady Amboasary Sud Davida sy Solomona ary ny fanjakan'izy ireo ;
Sabata, 30 May 2020 Ny fifalin'izao tontolo izao NY bibidia sy ny sariny, fiz Mpamonjy eo akaiky mandrakariva Ny Baiboly amin’ny mahatantara azy;
Zoma, 29 May 2020 Sambatra izay mahatoky NY voasary makirana Jesosy sy ny lalàn'ny fiarahamonina NY fianakavimbady ehefa nanao ny tany Andriamanitra: ny Genesisy sy ny fahamarinana araBaiboly, fizarana ;
Alakamisy, 28 May 2020 Niherendoza Lagalimboatabia maro Ny finoana, fiz Atodoha, fiz NY FAMORONANA AO AMIN’NY SORATRA MASINA (Mat. :,);
Alarobia, 27 May 2020 Efa ela no nahatokisako Azy Fomba hialana amin'ny fahantrana Mijere lafitsaranjavatra Ny famoronana sy ny fotoana ;
Talata, 26 May 2020 Iray minitra monja Fahadiovan'ny tanana sy ny ativava Manaiky aho Inona no mahatonga ny zatovo ho tia andrankandrana Tsy mampianatra ny fiakohofana amin(ny zavaboary ny Genesisy;
Alatsinainy, 25 May 2020 Antsoy Aho Ny vola sy ny rariny Safidin'ny finoana Torohevitra o an'ny fotoampambolena legume Ny famoronana ao amin'ny asa soratra tranainy;
Alahady, 24 May 2020 Tao anaty haizina Soupe saonjo Mpamonjy matory Infirmier Andry mivady Amboasary Sud fisaka hoe ny tany?;
Sabata, 23 May 2020 Miaiky ny fahadisoana vita na inona na inona Bibidia sy ny sariny, fiz Ny fanomezampahasoavan'ny fanahy Rehefa nanao ny tany Andriamanitra: ny Genesisy sy ny fahamarinana araBaiboly, fizarana ;
Zoma, 22 May 2020 Mahaiza misafidy Ny natiora Andriamanitra tonga nofo, nahoana? Inoana no atao mba tsy hananan'ny vadinao sakaiza? Ireo fahamarinana ao @ bokin'ny Genesisy, fianarana fanampiny;
Alakamisy, 21 May 2020 Ny dikan'ny fotoana hiandrasana valimbavaka Ramandrakotra na tsatoka @ vomanga Ny finoana, fiz Atidoha, fiz Ny fahalavoana sy ny hazo fijaliana;
Alarobia, 20 May 2020 Tsy tara Andriamanitra fa amin'ny fotoany avokoa Zaza mazoto Solomona Tsy zioga ny asa fa fitahiana Ny famoronana sy ny fanambadiana;
Talata, 19 May 2020 Hamoaka ny mpifatotra Zavamahamamo Ireo varavarana roa Ny zatovo sy fifandraisana arapiarahamonina Ny min'ny Sabata sy ny famoronana;
Alatsinainy, 18 May 2020 Atolory Ahy Malagasy matahotra an'Andriamanitra vahiny sy mpivahiny ihany isika no eto Tsara ho fantatra amin'ny fambolena rakotra maina , lena Ireo andro nanaovana ny famoronana;
Alatsinainy, 8 Martsa 2021
Tsy nety hianao Manampy ny tanora hahavita tena Sarobidy noho ny volafotsy sy ny volamena hianao Natumad Fandonahana ny tany Fiz Andriamanitra;